Kuala Lumpur, Abriil 6 (AFP) - ilaa 12 PM maanta, noro coronavirus-ka Malaysia ayaa xaqiijiyay 131 kiis iyo 62 dhimasho ah, taas oo tirada guud ee la xaqiijiyay ay noqotay 3,793. Maanta, 236 qof ayaa laga soo saaray cusbitaalka, taasoo tirada guud ee bukaannada la soo ceshay noqotay 1,241.
Intaa waxaa dheer, sida uu sheegay wasiirka gaadiidka ee Malaysia wei jiaxiang warqaddiisa, Malaysia laga keenay Shiinaha 100 sariirood oo ku habboon qeybaha daryeelka degdegga ah ayaa la gaarsiiyay dufcado. Qaybtii ugu horreysay ee 28 sariirood ayaa timid Malaysia maalin ka hor shalay waxaana loo diray dhowr isbitaallo dowladeed shalay. .
Wuxuu uga mahadceliyay aas aaska saliida qaranka deeqda deeqsinimada leh ee 100 sariirood ah qaybta daryeelka degdegga ah ay siisay wasaaradda caafimaadka daaweynta bukaannada coronavirus.
Sariiraha waxaa si gaar ah looga dalbaday hebei pukang qalab caafimaad co, oo ah kuwa ugu badan soo saaraha qalabka caafimaadka ee hebei, China.Cur ahaan, dalal badan oo adduunka ah, oo ay ku jiraan Talyaaniga, Isbaanish, Boqortooyada Midowday iyo Mareykanka, ayaa amar ku siinaya sariiro ka socda Shiinaha. u adeegso qaybaha daryeelka degdegga ah.
Sida laga soo xigtay wasiirka gaadiidka Malaysia wei jiaxiang, “Ma fududa in la soo bandhigo sariirkan, oo midkiiba culeyskiisu yahay 250kg, waa in wasaaradda gaadiidka ay diyaarisaa saddex diyaaradood si ay sariiraha u keenaan waddankeenna.
Tan iyo markii maamulka duullimaadyada rayidka ee Shiinaha (CAAC) uu ka mamnuucay ajaanibta inay soo galaan Shiinaha illaa iyo 28-kii Maarso, wasaaradda gaadiidka waa inay si gaar ah uga codsataa CAAC inay u oggolaato duullimaadyada xamuulka hawada ee tianjin iyo Beijing, oo wata dhammaan 100 sariirood oo cusbitaalo ah oo guryahooda ku yaal.
Baaxadda weyn ee sariiraha awgeed, kaliya 28 sariirood ayaa buuxinaya awoodda diyaaradda oo dhan.
Wasaaraddu waxay sidoo kale wadatashi firfircoon la leedahay maamulka duulista rayidka ee Shiinaha si loo soo celiyo 72-da sariirood ee haray sida ugu dhaqsaha badan.
Sariirahaasi waxay gacan ka geysan doonaan badbaadinta nolosha bukaanka badan. Waxaan kugu mahadnaqayaa aasaaska saliida qaranka, xamuulka hawada, safiirka Shiinaha ee Malaysia iyo wasaarada arimaha dibada ee gacan ka gaysata sidii loo hubin lahaa in si sahal ah loogu wareejiyo sariirkan oo loo wareejiyo Shiinaha.
Intaa waxaa sii dheer, wasaaradda caafimaadka ee Malaysia ayaa ka soo dhoofisay Shiinaha 94 qaybood oo ah daryeel-caafimaadeedka deg-degga ah ee ay diyaaradda Malaysia ka soo qaado shixnad ka socota Shanghai una soo dirtay garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur xalay. Qalabkaan caafimaad ayaa wax weyn ka tari doona kooxda caafimaadka ee Malaysia si loo badbaadiyo nolosha qaaliga ah.